वाम गठबन्धन प्रत्युत्पादक - Naya Patrika
वाम गठबन्धन प्रत्युत्पादक
लामो संक्रमणपछि संविधानसभामार्फत जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि केही महत्वपूर्ण पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा, शान्तिसम्झौता हुँदै शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी द्वन्द्वलाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्नु छ । माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएको लामो समय भइसके पनि नेपालमा अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा द्वन्द्व समाप्त भइसकेको छैन । अर्को, हामीले संविधान विविधतामा एकता रहने गरी निर्माण गरेका छौँ । तसर्थ संविधानको कार्यान्वयन जटिल र कठिन छ भन्ने विषय विगतका अभ्यास र घटनाक्रमले देखाइसकेका छन् । तर पनि तीन चरणमा गरेर सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै राजनीतिक शक्तिलाई सहभागी बनाउन सफल भएका छाैँ । यो घटनाले संविधान कार्यान्वयन सम्भव छ भन्ने देखाएको छ । अहिलेको प्रमुख कार्यभार संविधान कार्यान्वयन भएकाले त्यो कार्यभार पूरा गर्ने राष्ट्रिय दायित्व सबै राजनीतिक दलको हो भन्ने विषय पुनः पुष्टि भएको छ ।
– माओवादी केन्द्रले एउटा खुट्टा कांग्रेसमा र अर्को खुट्टा एमालेमा राख्दा राजनीतिक अन्योल बढेको छ । वाम गठबन्धनले सरकारलाई अस्थिर बनाउन खोजेको आभास हुन्छ । यसले कालान्तरमा संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेर वर्तमान शासन व्यवस्था नै जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।
– ६० प्रतिशत सिटमा निर्वाचन लड्ने दल पहिलो हुनै सक्दैन । वाम गठबन्धनले एमालेलाई फाइदा गर्दैन, ऊ अहिलेभन्दा खुम्चने निश्चित छ । यो गठबन्धनले मुलुकलाई अस्थिर बनाउनेछ भने शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काममा पनि अवरोध उत्पन्न गर्छ । वामपन्थी एकता मुलुक र प्रजातन्त्रका लागि मात्र होइन, उनीहरू स्वयंका लागि पनि प्रत्युत्पादक छ ।
वाम गठबन्धनका असर
संविधान कार्यान्वयनको चरण सुरु भइसकेको, संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा एकाएक कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ‘कथित वामपन्थी एकता’ को नाममा चुनावी तालमेल र पार्टी एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छन् । अपारदर्शी किसिमले एकाएक उत्पन्न भएको घटनाक्रमले राजनीतिक अन्योल बढाएको छ । विशेषगरी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग तत्काल चुनावी तालमेल र कालान्तरमा पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थिति के हो ? ऊ प्रतिपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गरिरहेको छ कि नेपाली कांग्रेससँग गरेको तीनबुँदे सहमतिपछि बनेको गठबन्धनसँग छ ? माओवादी केन्द्रले एउटा खुट्टा कांग्रेसमा र अर्को खुट्टा एमालेमा राख्दा राजनीतिक अन्योल बढिरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकताले सरकारलाई अस्थिर बनाउन खोजेको आभास हुन्छ । सरकार अस्थिर हुनेबित्तिकै निर्वाचनका बारेमा अन्योल उत्पन्न हुन्छ । निर्वाचनको अन्योल भयो भने संविधान कार्यान्वयनमा गतिरोध उत्पन्न हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन हुन नसके वर्तमान शासन व्यवस्था जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।
माओवादी केन्द्र र एमाले नेताहरूको एकीकरण घोषणासभामा बोलेका अभिव्यक्ति मुलुकका लागि चिन्ताजनक छन् । विशेषगरी आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुईतिहाइ ल्याएर शासकीय स्वरूप बदल्ने चाहना र इच्छा उहाँहरूले राख्नुभएको छ । नेताहरूले सो सभामा अहिले नेपालले अभ्यास गर्दै आएको संसदीय प्रणालीलाई राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ल्याउने धारणासमेत राख्नुभएको छ । संविधानसभामा शासकीय स्वरूपमा सहमति भइसकेपछि संविधानमा अहिलेको व्यवस्था राखिएको हो । तर, संविधान निर्माणमा संसदीय व्यवस्थामा सहमति गरेका कम्युनिस्ट धारका दलले अहिले दुईतिहाइ ल्याएर व्यवस्था बदल्ने इच्छा देखाउनुले उनीहरूको विद्यमान राजनीतिक शासन प्रबन्धसँग असन्तुष्टि देखिएको पुष्टि हुन्छ । अहिले एकप्रकारले सेटल भएको शासन व्यवस्थालाई बदलेर अस्थिरता निम्त्याउने उहाँहरूको रणनीति रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यससँगै नेपालमा १० वर्षभित्र साम्यवाद ल्याउँछाैँ भनेर कम्युनिस्ट क्रान्तिको परिकल्पना गरी सरकार निर्माण गर्ने नभई सत्ताकब्जा गर्ने अभिप्रायः उनीहरूको देखिन्छ । तसर्थ हामीले कम्युनिस्ट एकतालाई बडो चुनौतीपूर्ण, कठिन र नकारात्मक किसिमले अथ्र्याएका छौँ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुने घोषणापछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रतिक्रिया आइरहेका छन्, यसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको ध्रुवीकरण हुन सक्ने, चलखेल हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । नेपालको दक्षिणतर्फ विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत छ, उत्तरतर्फ कम्युनिस्ट शासन पद्धति भएको मुलुक चीन छ । यी दुवै मुलुकबीचमा दुई ढुंगाको तरुलजस्तै बसेको नेपालमा हामीले आफ्नो राजनीति तीव्र ध्रुवीकरणमा नलगेर सहमति र सहकार्यको आधारमा अगाडि बढ्ने संस्कृतिलाई जति प्रवद्र्धन गर्न सक्छौँ, त्यति हाम्रो मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । यहा“ बस्ने नागरिकलाई राज्यले शान्तिको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छ । तसर्थ यस विषयमा गम्भीर भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
गठबन्धनले ध्रुवीकरण बढाउँछ
कम्युनिस्टहरूले चुनावी तालमेल गरेपछि त्यो तालमेलसँग असहमत रहेका लोकतान्त्रिक, राष्ट्रवादी, प्रगतिशील शक्तिलाई गोलबद्ध गर्ने दायित्व आफ्नो सम्झेर कांग्रेसले पनि छुट्टै गठबन्धनको तयारी थालेको छ । कांग्रेसले प्रजातन्त्रमाथि आउन सक्ने जोखिमको मुकाबला गर्न, राष्ट्रियतामाथि आउने जोखिमको मुकाबला गर्न र संविधानलाई संरक्षण गर्न छरिएर रहेका लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने शक्तिलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको हो । स–साना पार्टीलाई गोलबद्ध गरेर मजबुत लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको कानुनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो । । राजनीतिक दलहरूको आकार स–साना भएमा मुलुकमा अस्थिरता निम्तन सक्ने ठहर हाम्रो थियो । तसर्थ स–साना दललाई केही मात्रामा भए पनि एकीकृत गर्ने उद्देश्य राखेर थोरै मात्रामा भए पनि थ्रेसहोल्ड राख्ने कानुनी प्रबन्ध गरियो । तर, अहिले जसरी ठूला राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, यसले अवश्य पनि ध्रुवीकरण बढाउँछ ।
कांग्रेस लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ । प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस अहिलेसम्म सधैँ जितिरहेको छ । अहिलेसम्म कांग्रेसले मात्रै विभिन्न समयमा भएका निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छ । अन्य दलको संसद्मा बहुमत भएको अहिलेसम्म इतिहास छैन । कांग्रेसलाई कम्युनिस्ट शक्ति एक हुँदा कुनै असर पर्दैन । किनकि नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारासँग असहमति राख्ने धेरै ठूलो जनमत छ । त्यो कांग्रेसकै नेतृत्वमा गोलबद्ध हुने भएकाले कांग्रेसले विगतमा भन्दा ठूलो जनाधार पाउँछ भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन ।
गठबन्धन मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक
परस्पर अन्तर्विरोधी दुई राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा आउँदा जनताले कुन रूपमा लिन्छन् भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले विगतमा पाएको मतसंख्या जोडिन्छ भन्ने पनि सम्भव छैन । राजनीतिमा दुई र दुई जोडेर चार हुने गणितीय नियम पनि लागू हुने होइन । किनकि माओवादी केन्द्र र एमालेबीच मुलुकका विभिन्न स्थानमा तालमेलका कारण समस्या उत्पन्न भइसकेका छन् । समस्याका कारण दुई पार्टीबीच सिट बाँडफाँडसमेत हुन सकिरहेको छैन । धेरै ठाउँमा एमालेको नेतृत्व माओवादीले नमान्ने, माओवादीको नेतृत्व एमालेले नमान्ने परिस्थिति पैदा भइरहेको छ । यदि यस्तै परिस्थिति बनिरह्यो भने ती पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खुम्चने जस्तो देखिन्छ । विशेषगरी एमाले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेपछि ६० प्रतिशत मात्रै उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा होमिँदै छ । ६० प्रतिशतमा लडेर पनि दुईतिहाइ ल्याउँछाैँ भन्ने एमालेले दाबी गरिरहेको छ । दुईतिहाइ नल्याएर त्यसको आधा ल्याउँदा पनि कम सिटमा निर्वाचन लड्ने पार्टी पहिलो पार्टी हुन सक्दैन । तसर्थ आसन्न निर्वाचनमा रूपान्तरित संसद्मा दोस्रो रहेको एमाले यसभन्दा खुम्चने संकेत पनि देखिएका छन् । यसले ‘लङ टर्म’मा एमालेलाई पनि फाइदा गर्दैन । यसले मुलुकको प्रजातन्त्रलाई भने अस्थिर बनाउने र संविधान कार्यान्वयनलाई जटिलतातर्फ धकेल्नेचाहिँ निश्चित छ । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने कार्यमा पनि अवरोध उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ अहिले आएको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता उनीहरूका लागि पनि प्रत्युत्पादक र मुलुक र प्रजातन्त्रका लागि पनि प्रत्युत्पादक छ ।